Comment ပေးတဲ့အခါ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » Comment ပေးတဲ့အခါ …
Comment ပေးတဲ့အခါ …
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jun 6, 2012 in Editor's Choice, How To.. | 138 comments
Comment ပေးတဲ့အခါ ...
Comment ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို Dictionary ထဲမှာ ကြည့်လိုက်တော့ Noun အနေနဲ့ “ထင်မြင်ချက်၊ သုံးသပ်ချက်” လို့ တွေ့ရပြီး Verb အနေနဲ့ ကတော့ “ထင်မြင်ချက်ပေးသည်၊ မှတ်ချက်ပေးသည်၊ ဝေဖန်သည်” လို့ တွေ့ရပါတယ်။
ပို့စ်တစ်ခု တင်လိုက်တဲ့အခါ ပို့စ်တင်တဲ့လူတွေက သူ့ပို့စ်ကို ပေးမယ့် ထင်မြင်ချက်၊ မှတ်ချက်၊ ဝေဖန်ချက်တွေကို မျှော်လင့်မိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ကောင်းတဲ့ မှတ်ချက်လေးများ တွေ့ရပြီဆိုရင် အားရှိသွားပြီး ထပ်ရေးဖို့ ခွန်အားတွေ တိုးရပါတယ်။ ဆိုးတဲ့ မှတ်ချက်တွေ တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပျက်မိမှာ အမှန်ပါပဲ။ လူကိုးဗျ …။ ဒါပေမယ့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်ချက်၊ မှတ်ချက်တွေကိုတော့ ကြိုဆိုလျက်ပါပဲ။ ဒါက ပို့စ်ပိုင်ရှင်ဘက်ကို ကျနော့်အနေနဲ့ ကြည့်ကြည့်တာပါ။
ကွန်မန့်ပေးတဲ့လူ ဘက်က ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါ … ပို့စ်တွေကို လိုက်ဖတ်တယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး လိုက်ဖတ်တယ်။ နောက်ပြီး ကွန်မန့်များတဲ့ ပို့စ်တွေကိုလည်း လိုက်ဖတ်တယ်။ ပြီးရင် ပို့စ်ကို ကွန်မန့်ပေးတယ်။ ကွန်မန့်ပေးတဲ့အခါ ပို့စ်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ပေးတာ ရှိသလို၊ ကွန်မန့်ပေးတဲ့လူကို Reply လုပ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ Reply လုပ်တဲ့အခါ ပို့စ်ရဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ဆိုင်ချင်မှလည်း ဆိုင်မယ်။ ဆိုင်ချင်လည်း ဆိုင်မယ်ပေါ့ဗျာ။ မဆိုင်တာက ပိုများပါတယ်။ ဥပမာ – ကျနော် ရွာထဲ လည်နေတုန်း မောင်ပေ၊ ငဗိုက်၊ ဗြဲသီးတို့ရဲ့ ကွန်မန့်တွေ တွေ့တဲ့အခါ Reply လုပ်ပြီး ကပ်ဖဲ့သွားတတ်တယ်။ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ဘဲ မန့်တာကို ပြောတာပါ။
( ကပ်ဖဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငဗိုက် ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို အမှတ်ရမိတယ်ဗျ။ သူက ပြောဖူးတယ်။ ကွန်မန့်တစ်ခု ပေးပြီးရင် အငြိမ်နှပ်နေလို့ မရဘူးတဲ့။ ပြန်ပြန်ပြီး ကြည့်ရသေးတယ်တဲ့။ သူ့ကို လိုက်လိုက်ပြီး ဖဲ့တတ်လို့တဲ့လေ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်ဆို ကွန်မန့်တွေထဲမှာ မောင်ပေ၊ ငဗိုက်၊ ဗြဲသီးတို့ ကွန်မန့်တွေ တွေ့ပြီဆို လိုက်လိုက်ပြီး ကြည့်ရတယ်ဗျ။ မတော် ကိုယ့်ကို ဆော်ထားမှဖြင့် …။ ဤကား စကားချပ် …။ )
တကယ်တော့ ဒီပို့စ်က Comment ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် သိထားတဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောချင်တာပါ။ သိတယ်ဆိုတာ သိတာကိုပဲ ပြောတာပါ။ ထားပါ …။ အောက်က အချက်တွေပါပဲ။
ကိုယ်တကယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်ပါ။
ကိုယ်မှ တကယ် စိတ်မဝင်စားရင် ကွန်မန့်ပေးဖို့ မလုပ်ပါနဲ့။
” ပုံလေးတွေက လှလိုက်တာ၊ အားပေးသွားပါတယ်၊ ” ” ကောင်းမွန်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါ ” စတဲ့ အဖြစ် ခပ်တိုတို အဖြစ်ကွန်မန့်တွေကို ပို့စ်ပိုင်ရှင် အများစုက သဘောမကျကြပါဘူး။ အဖြစ်ကွန်မန့်ကို အဖြစ်ကွန်မန့်အဖြစ်သာ သဘောထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖြစ်ကွန်မန့် မပေးပါနဲ့။
ပို့စ်တင်သူ အများစုဟာ သူတို့ပို့စ်မှာ ထင်မြင်ချက်ပေးတာ၊ ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေကို သဘောကျတတ်ပါတယ်။
Comment စပေးတဲ့အခါ ပို့စ်ရေးသားသူရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို လေးစားတဲ့၊ ချီးကျူးတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ စတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါဟာ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကို ထပ်ရေးဖို့ အားပေး ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
ရိုးသားပါ။ ဟုတ်ပါတယ် comment ပေးတဲ့အခါမှာ ရိုးသားစွာ မှတ်ချက်ပြုရပါမယ်။ post ရဲ့ တနေရာရာမှာ စာလုံးပေါင်း မှားနေတာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု မှားနေတာကို တွေ့ပါလျက်နဲ့ “very nice post” လို့ comment ပေးလိုက်တာဟာ မရိုးသားရာ ကျပါတယ်။ post တင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမှားတွေကို comment တွေထဲမှာ ရှာလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှားနေရင် အမှားကို ထောက်ပြပေးပါ။
ပို့စ်တစ်ခုကို ကွန်မန့်ပေးပြီးရင်လည်း ပစ်မထားပါနဲ့။ သူများတွေ ဘာပြောသလဲ။ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကရော ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတာ ပြန်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူရင် ပြန်လည် ဆွေးနွေးပါ။
( ဖြည့်စွက် ။ ။ ပို့စ်ထဲမှာ မကျေနပ်တာ၊ ပို့စ်ရဲ့ ကွန်မန့်တွေထဲမှာ မကျေနပ်တာ တွေ့တဲ့အခါ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးကို မသုံးမိအောင် သတိထားပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး ယဉ်ကျေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ရွေးပြီးသုံးပါ။ ထိုအသုံးအနှုန်းများကို မသုံးတတ်ပါက မျက်စိမှိတ်ပြီး မသိသလို နေလိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ )
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဟိုဖတ်ဒီဖတ် လျောက်ဖတ်နေရင်းနဲ့ အထက်က အချက်လေးတွေကို တွေ့တာနဲ့ သဘောကျမိလို့ ဒီနေရာမှာ တင်လိုက်တာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ဒီပို့စ်ကလည်း ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် တွေ့မိတာလေးတွေကို ရွာကြီးထဲ ပြန်ရှဲတာပါ။
အမှန်တော့ နေ့တွက်လေးကိုက်သွားအောင် မရှိရှိတာကို ပို့စ်လုပ်ပြီး တင်လိုက်တာ … အဲ့ဒီလို မဟုတ်ပါဘူးလို့ …
တကယ်တော့ ရွာထဲ လျောက်ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတ ယူနေတာက သဂျီး ပိုက်ပိုက်ထက် ပိုပြီး အဖိုးတန်ပါတယ် … ဟုတ်တယ်ဟုတ် …
အဲ … ဒီရွာကြီးကို ဖန်တီးထားတာက ဘယ်သူတုန်း .. သဂျီးပဲ …
ဒီတော့ ဗဟုသုတတွေ ရတဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်နိုင်ဖို့ ပြုလုပ်ပေးထားတာကလည်း သဂျီးပဲ ..
အဲ့ဒီတော့ သဂျီးကို ပြန်ပြီး ကျေးဇူး တင်ရဦးမယ် …
အဲ … ဒါလည်း ဟုတ်သေးပါဘူး …
သဂျီးကို ကျေးဇူး မတင်ရအောင် စဉ်းစားဦးမှ ..
ဟုတ်ပြီ .. ဒီလိုမျိုး ဖတ်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ကျေးဇူးတင်ရမယ် …
ဆရာ၊ ဆရာမတွေဆိုတော့ ကျောင်း ..
အင်း .. ဒီကျောင်းကို တက်နိုင်အောင် ထားပေးခဲ့တဲ့ အဖေနဲ့ အမေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမယ် …
ပြီးတော့ မျက်စိ …
ဟုတ်တယ် .. ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မျက်စိကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရဦးမယ် .. သူကောင်းလို့ မြင်ရတွေ့ရ ဖတ်ရတာ …
ဒီထက် .. ဒီထက် … မျက်စိကို ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ပြန်ပြီး ကျေးဇူးတင်ရဦးမယ် …
အင်း .. ဦးပေါ်ဦး လျှောက်ထုံးထဲကလို ကျေးဇူးရှင် ဘယ်သူတုံး ဆိုသလို ဖြစ်နေပြန်ပါပြီ …
တော်ပြီဗျာ .. ရှုပ်တယ် .. ဒါဗြဲ …
ကိုပေါက်ကြီး အပေါ်က ပြောသွားတဲ့ ကွန်မန့်တွေ အားလုံးထောက်ခံပါတယ်
အမြန်ဆုံး ကွန်မန့် အများဆုံး ရတဲ့ ပို့စ် အနေနဲ့လဲ ဒီပို့စ် ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်
ပို့စ်တွေအကုန်လုံးကို ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် သုံးသပ်ထင်မြင်ချက်ကို တော့မပေးမိတာများတယ်။
တခါတလေပေးချင်ပြန်ရင်လည်း ကွန်နက်ရှင်ကမကောင်းလို့ ပေးမရတာတွေဖြစ်ပေါ့…
တလောက ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတဲ့ပို့်စ်နဲ့ကွန်မင့်တွေကိုကြည့်ပြီး တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ၀င်ရောက်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးချက်ထက် အငြင်းအခုံ စိတ်တိုဒေါသထွက်စရာတွေဖြစ်လာမှာ စိုးလို့ ပြောချင်တာတွေကို ကိုယ်ဖာသာ မျိုချ ပြစ်လိုက်ရတယ်။ အဲလိုလုပ်လိုက်ရတာလည်းတကယ်တမ်းကျမအတွက်အရမ်းခက်ပြီး အခုထိစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတုန်းပဲ။ တချို့ပို့စ်လေးတွေကျတော့လည်း ပြောစရာစကားမရှိ၊ တခါတလေတော့လည်း ဥာဏ်မမှီ အဲဒီအခါမျိုးမှာတော့ တိတ်တိတ် လေးပဲဝင်ဖတ်သွားလိုက်တယ်လေ။ တချို့ပို့စ်တွေမှာတော့ အသားလွတ်ဝင်ဆဲထားတဲ့ comment တွေတွေ့တယ်။ စည်းကမ်းတွေက ရုံးတွေမှာလိုသိရုံပဲလားဟင်?
ဒါပေသိ အခုပြောပါ့မယ်။ ဆရာ တင်သောယ္ခု ပို့(စ်)ကို ဖတ်မိပြီး ရွာသားတစ်ယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်ကိုဆက်မရေးဖြစ်တာပါ။ဆရာ့ ကိုစော်ကားလိုစိတ်မရှိပေမယ့် …
အဲဒါကို ဖတ်ပြီး တော်တော်စိ်တ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကွန်မန့်တွေကြည့်ပြီး ရယ်ပါစေတော့ဆိုပြီးတင်ပြခဲ့မိတာပါ။
ဆရာ့ (ပို့ စ်)က နောက်နေ့တက်လာတော့မှ သဘောပေါက်သွားပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျား။နောက်အမြင်မသင့်တော်ရင် လိုက်ပဲမန့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။
တခါ,တခါလည်းpost နဲ့ မသက်ဆိုင်တာလေးမန့် မိတယ်..
မောင်လေးတို့ လိုရေလောင်းပေးတတ်,မြေသြဇာဖို့ ပေးတတ်တဲ့
အားပါးပါး မန့်တွေမှ ပလူပျံနေပါလား ဟဟိုကပျံလာတာကဘာလေးပါလိမ့်
အမေဒိကံက ဗမာငွေ ၁၀ တန်လေးပျံလာဒါပဲ အိပ်ထဲကောက်ထည့်လိုက်ပြီ
ဒီလို ဒီလိုနဲ့ ငွေလှိမ့် ယူနေကြတာတော့
ဇဂါးအတင်းစပ်…အပေါ်က aye.kk ရဲ့ကွန်မန့်ကို
ပုဂံ ပိုစ့်မှာ ကိုရင် အံစာတုံး ပြောသလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း (ရိုးသားစွာ) သွားမန့် လိုက်တာ .. ပိုစ့်ပိုင်ရှင် စိတ်ဆိုး သွားပလား မသိဘူး .. အဲဒါ ဖြေရှင်းပေးဦး ..။
ဟဲ့ပိုစ့်ပိုင်ရှင်က ရှည်ရှည်မန့်မှကြိုက်ပါတယ်ဆို။ တိုတာအေ။ ၁၀ ဘယ်နားမှာပါလိမ့်။
ဒီပိုစ့်ကိုများ တစ်ဆယ် ၀င်ယူတဲ့ ပိုစ့်များ မှတ်နေကြသလား
သူကြီးမင်းတွေ့ရင် နှစ်ပြူးလုံး နဲ့တွေ့တော့မှာပဲ …
ပိုစ့်ပိုင်ရှင်က စေတနာကောင်းနဲ့ အကြံပေးတာကို …
ဒါ နောက်စရာများ မှတ်နေသလား ဟင် ..
( ဟီ ဟိ တစ်ဆယ်ရပြီ … )
သဂျီးမင်းဆီက ၁၀ တန်လေးယူရမှာ အားနာလို့မန့်တော့ဘူးနော်………..။
ဟယ်… ယူကုန်ကြပီ… ယူကုန်ကြပီ….
ဟေးး…. ဒို့လဲရပီ.. တစ်ဆယ်……
သားသားလေး အမှတ် နှစ်ကိုလည်းဖေဂျီးက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ၁၀ ၀င်ယူသွားပါတယ်ဗျို့ ….
မဟုတ်ရင် ခေတ်မမှီမှာစိုးလို့ …
ခါတိုင်းတော့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်ပဲ ဖတ်ဖြစ်တာ …
comment မပေးဖြစ်ဘူး ……….
လာထား တစ်ဆယ် …….
အာ တင်းတယ်ကွာ …… မနေ့ကမန့်ထားတာမတွေ့တော့ဘူး အခုလိုက်ရှာနေတာ ……… ဗျို့ပို့စ်ပိုင်ရှင် ကိုအံချာတုံး ကျွန်မမနေ့ကမန့်ထားတာကို ဖျက်လိုက်လား …… အဟမ်း အဟမ်းနဲ့စထားတာ ….. ဖျက်လိုက်ရင်ခွင့်တောင်းပါ သများရေးထားတာကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲဖြစ်ရင် ပွိုင့် ၁၀၀၀ နှုတ်မှာနော် … အလဲ့ သွားချီးလေးသံနဲ့ ……..
၁၀ တွေ များလို့ လျှော့လိုက်ပီကွ..
၆ ကျပ်တဲ့ … တောင်းချင်အုံးဟဲ့ ၁၀ …
မြန်မာငွေကျပ်တစ်သောင်းတန်ထုတ်သည်ကို ထောက်ခံသောအနေဖြင့် သူကြီးပေးသနားသော
ကွန်မင်းပွိုင့်ကို 10 ကနေ 6ကျပ်လို့ တန်ဖိုးချလိုက်တာ တကယ်လားဗျာ။
အာ သွားချီးမတရားဘူးဂျာ …… အမေတစ်ကန်မှာနေပီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝါဒတွေသုံးတယ် အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး (၂) မျုိုးပဲ ……..
ဒါဆိုလဲ ဒီပိုစ်ကိုကော်မင်းပေးရင် ခြောက်ကျပ်မပေးနဲ့တော့။
ဒါကတော့ အံဇာတုန်း ကျနော်အပါအ၀င် ရွာသူားအားလုံး သူကြီးကို အချစ်စမ်းတာနေမှာ။
ဒါနဲ့ဆိုရင် ဒီပိုစ်တစ်ပုဒ်ထဲက ငါးဆယ်လောက်ရပြီထင်တာဘဲ။
စာရေး ဓါတ်ပုံရိုက်တာထက်တောင် ပိုရသေးတယ်နော်
ကိုခိုင် တစ်ဆယ်ကနေခြောက်ကျပ်ဖြစ်သွားတာတော့ တကယ်ကြီးဗျ။
ခြောက်ကျပ်လဲ မနဲဘူး..ရသလောက်တော့ ယူရမှာပဲ..ဘားမှ..ဘားမှလာပြောနဲ့ 
ဖြဲဒီးနဲ့ မိပေါက်တို့ကတော့ ဒီပိုစ့်နဲ့တင် တော်တော်တွက်ခြေကိုက်တွားဘီ
လာထား လာထား ပေးသလောက်ယူဒယ်
comment တွေများနေသောကြောင့် comment မပေးတော့ကြောင်း
comment ရေး၍အသိပေးအပ်ပါသည်။ လာထား……..
ဒီပို့စ်နဲက မျက်ဖြူစိုက်သွားပီ ..
လားထား တစ်ဆယ်ကို လန့်လို့ ခြောက်ကျပ်ကို ပြောင်းလည်း
လာထား ခြောက်ကျပ် ပဲ …….
ကျနော့်ရဲ့ ပို့စ်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့
လာရောက် အားပေးတော်မူကြပါကုန်သော အရပ်ကတို့အား
အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ….
အားလုံးကို ခင်တဲ့ …
အော် ငါ့အဖြစ်က ၁၀ တုန်းက မသိ ၆ကျပ် ခေတ်မှ သိရပါလား…. အင်း ၆ကျပ်ဆိုတော့လဲ ၆ကျပ်ပေါ့ဗျာ… ပို့စ်ကော ကွန်မန့်တွေကော အကုန်ဖတ်သွားတယ်ဗျာ…. လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးပေါ့… မန်းလေး ဂေးဇတ်အကြောင်းတော့ သိပ်မသိသေးပါဘူး… ဒါပေမယ့် ရင်းနှီးမှု ခင်မင်မှု ဖော်ရွေမှုအားလုံးကို ခံစားရပါတယ်… မဟာအံစာတုံး ပိုစ်ကို ဖတ်တော့လဲ မှန်သလိုလိုပဲ ….. လေးပေါက် ပြောတာလဲ မှန်သလိုလိုပဲ….. အဲဒီ သလိုလို နဲ့ပဲ မန့်သွားတယ်ဗျာ…..
အရီး Khin Latt says:
အခုတော့ မှတ်ချက် တစ်ခု ၁၀ ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ မောင်ဝဏ္ဏရေ။
ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် တစ်ခု အတွက် မှတ်ချက် တစ်ခုစာဘဲ ပွိုင့် ၁၀ ရပါမယ်။
သဘောကတော့ တစ်ခုမှာ မှတ်ချက် ၅ ခု ပေးလဲ ပွိုင့် ၅၀ မရပါ။ ၁၀ ဘဲရပါမယ်။
ရွာသား အသစ်လေး ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ :-)
(… မဟာအံစာတုံး ပိုစ်ကို ဖတ်တော့လဲ မှန်သလိုလိုပဲ ….. လေးပေါက် ပြောတာလဲ မှန်သလိုလိုပဲ…..)
တခါတရံမှာ အမှန်တရားဟာ တခုတည်း မဟုတ်ပဲ အများကြီးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မဟာရာဇာကြီးရေးတာ အမှန်ဖြစ်သလို …
ကြားထဲမှာ မလွန်သွားအောင် လစ်မစ်လေး တွေတော့ လိုတာပေ့ါ။
အကောင်းဆုံး ကွန်မန့်တွေပေးပြီး ရွာထဲမှာ တသွေးတသားတည်း ရင်းနှီးချင်ခင် ပျော်ရွှင်စွာ လှည့်လည်သွားလာ နေနိုင်ပါစေ။
ရိုးသားပါ။ ဟုတ်ပါတယ် comment ပေးတဲ့အခါမှာ ရိုးသားစွာ မှတ်ချက်ပြုရပါမယ်။ post ရဲ့ တနေရာရာမှာ စာလုံးပေါင်း မှားနေတာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု မှားနေတာကို တွေ့ပါလျက်နဲ့ “very nice post” လို့ comment ပေးလိုက်တာဟာ မရိုးသားရာ ကျပါတယ်။ post တင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမှားတွေကို comment တွေထဲမှာ ရှာလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှားနေရင် အမှားကို ထောက်ပြပေးပါ။ တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ပိုစ်ပါ ကြိုက်တယ် တကယ်ကို စိတ်ထဲကကိုအားပေးတာပါ ဒီပိုဒ်လေးဆိုစနိုးတကယ် ကြိုက်တယ် စနိုးတို့လိုအမှား ရှိတဲ့သူတွေအတွက် အမှန်ပြင်ပေးတာကို တကယ့်ကိုထောက်ခံတယ် ။
သီဟသူရ ညောင်ရမ်းဂျီးထူ says:
ယီးဘဲ ဆဲဒဲ့ပို့စ်မျိုးဆို ဖျက်သင့်ဗာဂျောင်း…
ဘယ့်နှယ် ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့် .. ဟီဟိ
သဂျီး ညည်းသွားတဲ့ ပို့စ်ပဲ
ကိုယ်ကဘာမသိညာမသိနဲ့ ဟာသပို့စ်မှတ်ပြီး ၀င်အားပေး ကွန့်မန့်ပေး နောက် ပြန်သိရတဲ့အခါ ကိုယ်ငပေါကြီး ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားရပါလား လို့ထင်မိတာကြောင့်
အခုနောက်ပိုင်း အမှန်တကယ် စာရေးတဲ့ပို့စ်တွေကိုပဲ သေသေချာချာသတိထားပြီးမန့်ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
၁၀ ပေးဒယ် ဆိုရို့ ဘာများလဲပေါ့ …
နာလည်း ၁၀ ရမလားလို့ …
မန့် တာ ဟုတ် ဖူး လို့ …
နောက်ဆို ရွာထဲက စာဒွေ ဖတ်ပြီး မန့် မှာ ဖစ် လို့ ထု ထဲ က စ မန့် နေပါ ပီ လို့ …နော် နော်။။
Thint Aye Yeik on Learning to write in English (7)- Professor Myo Kyaw Myint